विवेकपूर्ण निर्णय गर | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / सम्पादकीय / विवेकपूर्ण निर्णय गर
विवेकपूर्ण निर्णय गर
Posted by: युगबोध in सम्पादकीय January 7, 2019	0 86 Views
प्रदे श नंं. ५ को नामाकरण र राजधानी सम्बन्धी विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउने उद्दे श्यका साथ गठित संसदीय समितिले यो विषयलाई टुंगो मा पु¥याउने गरी काम गर्न अब निकै ढिलो भइसके को छ । समितिको म्याद एक पटक थप भइसके को ले अब पटक–पटक म्याद थपे र यसलाई निरन्तरता दिइरहनु राजनीतिक, कानुनी र नै तिक दृष्टिले समे त उचित हुँदै न । ५ नं. प्रदे शका जनताको भावना, भौ गो लिक सुगमता र भविष्यका लागि समे त उपयुक्त हुने गरी राजधानीको विषयलाई टुंगो मा पु¥याउन सकियो भने समग्र प्रदे शको समृद्धि र विकासको सार्थक यात्रा प्रारम्भ गर्न सकिने छ । यस विपरीत हुन गयो भने फे रि द्वन्द्व र भौ गो लिक विभाजनको पीडा भो ग्नुपनेर् परिस् िथति आउने छ ।
ने पालको संविधानले प्रदे शको नामाकरण गनेर् र स् थायी राजधानी तो क्ने अधिकार प्रदे शसभालाई दिएको छ । प्रदे शसभाले सहमतिबाट वा दुई तिहाई बहुमतको आधारमा यससम्बन्धी निर्णय गर्न सक्छ । सो ही बमो जिम प्रदे श नं. ४, ६ र ७ ले यो विषयलाई ट्ुंगो मा पु¥याइसके का छन् । समग्र प्रदे शको विकास र समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ गर्नका लागि राजधानी र नामाकरणको ट्ुंगो जतिसक्यो छिटो लगाउन सक्यो , त्यति नै राम्रो हो  । यो विषय नटुंग्याएर विकास र समृद्धिका कुरा जति गरे पनि जनताले पत्याउने छै नन् । प्रदे श संरचना खडा गनेर् काम करिव–करिव शून्यबाटै शुरु गर्नुपनेर् अवस् था रहे को ले यो विषय छिटो टुंग्याउन आवश्यक छ ।
ने पालमा संघीयताको प्रयो ग नितान्त नयाँ हो  । यसअघि स् थानीय र के न्द्र सरकारका आ–आफ्नै संरचना भएकाले अहिले स् थानीय सरकार सञ्चालनमा के ही समस् या दे खिए पनि त्यो अस् थायी हो  । जहाँसम्म प्रदे शको कुरा छ, त्यहाँ पक्कै पनि धे रै समस् या र जटिलताहरु छन् । कतिपय सवालमा अन्यो ल र द्विविधाहरु दे खिन्छन् । तर संघीयता कार्यान्वयनमा लै जाँदै गर्दा सबै समस् याहरुको समाधान भे टिदै जाने छ । खासगरी तीब्र विकास र समृद्धिको जनचाहनालाई मूर्तरुप दिन संघीयतामा जानु परे को ले प्रदे श सरकार र संसदले यही विषयलाई के न्द्रमा राखे र काम गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएन भने आगामी दिनमा संघीयताको औ चित्य र आवश्यकतामाथि नै प्रश्नहरु उठ्ने छ । त्यसै ले हरे क विषयवस् तुलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र विवे कसम्मत निर्णय गनेर् क्षमता प्रदे श सरकार र प्रदे शसभाले राख्नुपर्छ ।
यतिबे ला बुटवल, हे टांै डा, विराटनगरजस् ता दक्षिण सिमानामा र प्रदे शका धे रै जनतालाई अपायक पनेर् स् थानमा अस् थायी राजधानी तो किदा स् थायी राजधानी तो क्ने र नामाकरण गनेर् काम पे चिलो बन्न पुगे को छ । तर पनि विगतको त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्चाएर आमजनताको भावना अनुकूल हुने गरी उपयुक्त निर्णय लिनुको विकल्प छै न । अझै पनि के ही व्यक्ति र स् वार्थी समूहहरु मै ले भने कै ठाउँमा वा मे रै घर आँगनमा राजधानी चाहियो भन्छन् भने त्यो बालहठ मात्र हुन सक्छ । यस् तो सो चाइ संघीयताको मर्म र भावना विपरीत हुन्छ । सबै विकल्पहरुमा खुला छलफल गरे र उपयुक्त निर्णय गनेर् विवे क र सामथ्र्य प्रदे शसभाका सदस् यहरुले दे खाउन सक्नुपर्छ । अब बनाउने प्रदे श राजधानी भने को नयाँ शहर नै हो  । अब आठवटा काठमाडौ ं नबनाउने गरी भावी पुस् तालाई स् वच्छ, सफा, हराभरा राजधानी हस् तान्तरण गनेर् गरी विवे कपूर्ण निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ।
प्रदे श नं. ५ को नामाकरण गनेर् सवालमा खासै समस्या दे खिएको छै न । तर स् थायी राजधानी तो क्ने सवालमा के ही जटिलताहरु दे खिएका छन् । प्रदे शको स् थायी राजधानी तो क्दा विवे क पु¥याउन सकिएन भने प्रदे शको भौ गो लिक संरचनामा परिवर्तन आउने सम्भावना छ । अहिले कै अस् थायी राजधानीलाई स् थायी कायम गरियो भने पश्चिमका बाँके र बर्दिया जिल्लाले ६ नं. (कर्णाली) प्रदे शमा मिसिने घो षणा गरिसके का छन् । त्यसबाट दाङ समे त प्रभावित हुने स् िथति छ । किनभने कर्णाली प्रदे शको राजधानी सुखेर् तसँग दाङको सिमाना जो डिएको छ । यहाँका जनतालाई पूर्वको कुनामा पनेर् प्रदे श राजधानी भन्दा सुखेर्त नै पायक पर्छ । त्यसै ले प्रदे शका सीमारे खाहरुलाई यथावत राख्ने हो भने प्रदे शका बहुसंख्यक जनतालाई पायक पनेर् स्थानमा राजधानी तो किनुपर्छ ।
के ही समययता प्रदे शको नामाकरण र राजधानीको विषयमा प्रदे श सांसदहरु मुखर हुन थाले का छन् । के ही सांसदहरुले त आफ्नै जिल्लामा राजधानीको दाबी गरे र हवल्दारी चरित्र दे खाउन थाले का छन् । यो सबै विवे कहीनताको दुष्परिणाम हो  । यस् तो परिस् िथतिमा विवे क र संयमताका साथ नयाँ उपयुक्त स्थानमा प्रदे श राजधानी तो क्ने काम हो ला भने र धे रै आशावादी हुने ठाउँ दे खिन्न । प्रदे शसभाले पक्कै पनि विवे कपूर्ण र औ चित्यपूर्ण निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । यो जनस् तरबाट धे रै दबाब दिनुपनेर् विषय पनि हो इन । समग्रमा यो विषय प्रदे शको विकास र भविष्यसँग जो डिएको छ ।
Previous: दाङ पर्या–पर्यटनका लागि उपयुक्त हुनसक्छ
Next: नौदेखि ६४ वर्षका साहित्यकारको रौनक